Maxkamada Mubaarak oo wareer ka jiro - BBC Somali - Warar
Maxkamada Mubaarak oo wareer ka jiro
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 13 Abriil, 2013, 10:28 GMT 13:28 SGA
Xusni Mubaarak iyo labadiisa wiil oo ku jira qolka xiran ee maxkamada ee dadka dacwada loo haysto.
Dhagaysigii koowaad ee maxkamada madaxwaynihii hore ee Masar Xusni Munaarak ayaa waxay ku dhamaatay jahawareer, iyadoo garsoorihii maxkamada ku dhawaaqay inuu dacwada iska wareejin doono.
markii maxkamadda la keenay Xusni Mubaarak, oo lagu wado sariirta bukaanka lana geeyay qolka xiran ee dadka maxkamada la saarayo isaga iyo labadiisa wiil, garyaqaanka ayaa sheegay inuu dacwada ku wareejin doono maxkamad kale.
Dacwada ayaa dib loo qabanayaa ka dib markii uu Mubaarak ka qaatay racfaan xukunkii xabsi daa'inka ahaa ee sanadkii hore. Waxaa lagu helay Mubaarak dacwadii hore danbi inuu ku lug lahaa dilkii dadka mudaaharaadayay sanadkii 2011 markii ay bilaabmeen kacdoonkii lagu riday